Okukhethekile "Cybernetics Economic": Ubani Ngisebenza?
izicelo ezihlukahlukene ziba ekolishi, ngokukhetha "Cybernetics Economic" okukhethekile. "Ngokusebenzisana ne-diploma?" - nesithakazelo kanye amaphesenti ayishumi kuwo, lo sagacious kakhulu. Kodwa iningi usacabanga namuhla. Abaningi siholwa izivivinyo emnyango (izibalo nolimi), abanye elingwa isithunzi Faculty of Economics, Okwesithathu uphefumulela ithemba amnandi yokuba abaphathi (ngoba uMnyango Economic Cybernetics uhlola ngokunembile le nqubo).
Nokho, ucwaningo eqenjini 0609, ngokushesha sibhekene uhlelo lwezemfundo okuqinile, okubandakanya amabhlogo we zezibalo, kwezomnotho, ube nesandla esivulekile ubuciko imfundo.
cybernetics Economic njengoba isihloko cwaningo
Ngaphandle ilungelo ukuphumula Ukwakheka kwezitho izisekelo lunye esizayo futhi imfundo professional ngeminyaka yokuqala neyesibili. Ezomnotho, ezimali, izingabunjalo, okungenzeka theory; Konke lokhu - amabhlogo wokwakha kule nokwakheka ulwazi impohlo esizayo noma ze-master.
Futhi kuphela ngonyaka wesithathu-umfundi-cybernetics iqala okufakile kweqiniso ku mkhakha.
Abafundi baqale isifundo esijulile computer science, kahle ngempela ithuluzi software yesimanje, okuyinto esetshenziswa cybernetics kwezomnotho. Okukhethekile cybernetics yesimanje kuhilela ifa isofthiwe efanele :. Microsoft MSDN Academic Alliance, isicelo amaphakheji Statistica, OMFISHA (Isazi Programming System), VenSim, Xelopes (izimayini RFP), njll Inqubo zemfundo kuhilela ikhompyutha ukuqeqeshwa okuqhubekayo ongoti esizayo. izindlela zesimanje ukuhlaziywa uvumele ukuze ubone kahle hle ukuxazulula inkinga ukulawula ngumuntu Luhlolo loluphelele umthelela izici ezihlukahlukene ukusebenza kohlelo kwezomnotho.
Abantu abasha bayasazi ezingeni izinkinga zingaxazululwa, ukuthi cybernetics akuyona kuphela isayensi ukuphathwa kanye Umhlahlandlela methodical nokusizwa ngezidingo ezingokoqobo indlela yokuphatha ezihlukahlukene nobunzima indlela yokuphila nesimiso sezomnotho.
isisekelo Analytical, ukuthuthukisa umfundi-cybernetics
Faculty of Economic Cybernetics ziphoqa ngenxa iphrofayli ithemba ukuqeqeshwa umsebenzi. Yena ehlonishwayo ngempela. Ngemva Cybernetics wadala ezimpambanweni zomgwaqo isayensi ikhompyutha, ezomnotho kanye mathematics.
Ulwazi-mathematics ne-computer science kwamukelwa ithuluzi emhlabeni sokuba ukuhlaziywa izinhlelo ezithile kwezomnotho amabhizinisi, amafemu, izinhlangano, izifunda, izimboni) kanye kumiswa ukuphathwa ubuchwepheshe.
Abafundi eyabhaliselwa EC, bathole ulwazi eziyisisekelo eziseZwini emkhakheni wezomnotho, izinhlelo, umqulusizinda. Azuza adingekayo isisekelo kohlaziyo, libhekene sub-zici ezilandelayo:
· Ukumodeliswa Cybernetic amasistimu ezomnotho nezenhlalo, isigaba sabefundisi onobuhle;
· Kuqiniswe ukuhlolwa amakhono eziyinkimbinkimbi, izinhlelo phezulu, futhi subsystems ukulinganisa ebalulekile;
· Izinhloso eyakhuthaza ngezigaba;
· Ukuphathwa nokulawula izinhlelo yenhlangano;
· Kulungiselelwa ukugeleza kwaziswa ekuxazululeni izinkinga zokuphatha;
· Umbono Onembile kolwazi ezakhayo futhi entropy;
· Nokuvumelana izinhloso kumasistimu ephethwe yisigungu sesonto, ngezinhloso zokwakha;
· Lawula izinhlelo phezulu.
Ngakho, umuntu usebenzisa izindlela cybernetics kwezomnotho, kuyinto izinhlelo umhlaziyi ezifunwayo ukuphathwa crisis (ikhono lokwenza izinqumo ezifanele ezimweni ezinzima), futhi abakwazi ukubikezela zomnotho ngokwabo futhi ufake umfutho owengeziwe yabo.
Ubani ongaba iziqu ubuhlakani "Cybernetics Economic"
Bafuna emakethe yezabasebenzi, iqoqo lolwazi namakhono afanele amakhono iziqu kuyinto cybernetics kwezomnotho. Employment kule okukhethekile ekahle (esisebenzayo wezabasebenzi yokuncintisana) namuhla kusho ibanga sasivumela usezimweni:
- Bank Economist ukuhlaziya;
- Analyst IT kanye nokuxhumana;
- Systems Analyst inkampani (ibhizinisi);
- Systems Administrator, Database;
- Inhloko Financial and Economic Division;
- Uthisha computer science futhi IT;
- Iphini Lomqondisi-IT;
- umqondisi encane amabhizinisi zobuchwepheshe.
Abafake izicelo iqhaza emncintiswaneni lapho cybernetics wamukelekile kwezomnotho phakathi ulwazi jikelele namakhono ikhandidethi (mkhakha ebhaliwe yengqondo futhi zokudala).
Deformation yokuqatjhwa umphakathi wesikhashana
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi bocwepheshe abakwaziyo wazibekela imigomo futhi uyiphishekele, elinde abahlaziyi okuthunyelwe uhlelo, onjiniyela kolwazi kwezomnotho izinhlelo. Emazweni nge athuthukile uhlelo emakethe - yebo, ngaphansi kohlelo zesikhashana, kulolu hlu isikhathi eside.
Lapho mkhulu iphesenti okungenzeka, ukuthi kuyoba umphathi noma sezomnotho umfundi idigri kwi "Cybernetics Economic". Ubani Ngisebenza? Impendulo kuthanda umsebenzi wangempela izibalo the best iziqu enyuvesi.
IE 32 abantu - abafundi kakhulu - 13 zezomnotho steel (abaphathi), 7 - onjiniyela (program), 2 - ososayensi, 6 - phezulu abaphathi (abaqondisi); 2 - IT-ongoti izinkampani zangaphandle; 2 - iphrojekthi abaxhumanisi.
Ngokusobala, cybernetics kwezomnotho - okukhethekile ukuthi kuhlobene nezinga ezingeni yentuthuko amabutho zikhiqize isimo. Ngokwemvelo, lokhu kusho abaqashi yezwe, okuyinto ithumela kwamanye amazwe angaphezu kuka-90% ukukhiqizwa ifayela eliwumthombo nekhompyutha isayensi (ezingeni eJalimane, eJapane), ngeke abeke isidingo eningi yezindleko ongoti cybernetics. Futhi abaqashi ezweni share ukuthekelisa kwemishini ingeqi 5% (ezingeni lamanje lamazwe wangaphambili CIS) ngokuya ukunikela ochwepheshe - Cybernetics Economist.
ukuma Yemvelo cyberneticists zezomnotho emakethe yezabasebenzi
Ingabe ilungelo ngokulandela intuthuko kwezesayensi nakwezobuchwepheshe? Phela, njengoba ehola abasebenzi abasha zokuphatha, ochwepheshe ubuchwepheshe, ifuna nesikhathi cybernetics kwezomnotho. "Ngubani ingasebenza, siphetfo ubuhlakani ezifanele?" - lo mbuzo kuyinto okunengqondo abafundi ukukhathazeka. Ngeshwa, ama-oda ngqo abaneziqu cybernetics umnotho kazwelonke eyenza kancane. Kodwa lokhu akusho ukuthi awayona. Ngeshwa, noma mhlawumbe ngenhlanhla, abathweswa iziqu-Cybernetics has ukwenza ngokuvumelana nalesi simiso "wangisiza ominzayo -. Nomsebenzi wezandla ominzayo" Rethinking izibalo umsebenzi njengoba kuboniswe ngenhla abafundi kakhulu, siye washayelwa a Yokuwina ambalwa ukuze amasu kube yimanje:
· Umphathi wephrojekthi;
· Inhloko encane amabhizinisi ngobuchwepheshe (okwazi kumuntu oyedwa ukwenza njenge project manager, futhi lokhu - amandla akhe);
· IT ochwepheshe abasebenza angaphandle izinkampani IT emakethe;
· Umsebenzi phesheya.
Kungani benza ezisizayo? Impendulo ilula. Cybernetics uchwepheshe, ekubalandeleni, njengoba isisho, "ukubulala izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa": ivela okukhethekile eziyisisekelo futhi uthola iholo ehloniphekile.
Kwesisekelo sale - ungokoqobo, ngoba izifundo bebheke "Cybernetics Economic" okuhambisana ngempela nge ukuthambekela STP. University orientation inqubo yemfundo akuyona ungaqiniseki - Ukwakheka kwezitho isizukulwane esisha abaphathi abaphezulu ngumnikazi nolwazi kwezomnotho ezijulile nobuchwepheshe besimanje.
Izici nobuntu zomsebenzi osomnotho, ososayensi computer
Ngempela, ukuze kuzuzwe impumelelo yokwenza yebhizinisi, kufanele:
- ukuqonda ngokujulile futhi uzenza inqubo kwezomnotho kanye nokusetshenziswa kanye accounting ubuchwepheshe yayo;
- kabusha izinqubo okukhulunywe ngawo ngaphambili ngesikhathi amabhlogo amenable ukuba uhlelo lokwelapha;
- ukudala (ukwaba) hardware ezanele;
- ukudala inqubo ukusebenza okuphezulu (uhlelo), ukususa ukuphindaphindeka Imininingwane;
- ukwenza ukuqeqeshwa ochwepheshe ezisebenza Cyber izinhlelo;
- ukukhiqiza Ukusungulwa kwalolu ukwandisa ukusebenza kahle;
- ukusungula uhlelo ukwesekwa ngempumelelo;
- Ukwethulwa Cyber izinhlelo lisetshenziswa mass, ngezikhathi esikhiqiza izenzakalo ugqozi abasebenzi.
Ukuphathwa komsebenzi okhishiwe kohlelo yasebhange njengendlela mkhakha womsebenzi ngezinga e EC
Ukuze osomnotho, zezibalo namuhla yezindawo wangempela komsebenzi nokuphathwa kwezinhlelo e komkhakha wamabhange.
Okwamanje, uma kukhona inqubo nokwenza kahle amabhange, okuyinto ezingeni phrojekthi funa ngempela njengoba endaweni yolwazi kwezobuchwepheshe cybernetics kwezomnotho. Ubani ukusebenza kwamabhange ukuba Bachelors master cybernetics? abaphathi project kanye neqembu elalenza lo msebenzi emahhovisi emaphakathi amabhange (azungeze izikhundla ezifana azitholakali). Bank okusalungiswa uhlale ukhonkolo: uklanyelwe isihloko endaweni ethize.
Amaphrojekthi amaningi ezisetshenziswa njalo emkhakheni wezamabhizinisi, okudayisa, amabhizinisi amancane naphakathi, ehhovisi. Ukukhuthaza kubo emabhange isimo kukhona neminyango unomphela nokuphatha. Ngokuvamile, kuphrojekthi ezihilela ikhanda, umphathi futhi neqembu elalenza lo msebenzi. Lesi sakamuva sihlanganisa abameleli umugqa imiNyango efanele ebhange, lapho ikusasa ezosebenza cybersystems.
Ikakhulukazi umsebenzi okusalungiswa yasebhange
Ukuguquguquka kwempilo iphrojekthi siqukethe izigaba ezintathu: zangaphambi utshalomali, utshalomali nangemuva utshalomali. Ekuqaleni walungisiswa umqondo yephrojekthi, phakathi kwesikhathi lapho Okuqondiwe uxhaso sokuboshwa, kugomela zibheke nokuhlela kwenziwa. Ukuthuthukiswa okhishiwe unquma uhlu imisebenzi, ukuhlanganiswa abadlali, isikhathi amasheduli, amadokhumenti ukwakhiwa, izivumelwano kunesidingo nge abahlinzeki kanye nezinkontileka. Lokhu kulandelwa, ngokulandelana, izigaba ibulawa ngesihluku futhi ekupheleni. Iphela umjikelezo iphrojekthi isigaba wokusebenza, ephumelelisa controllability, ukuthembeka, ukulawula, impendulo.
Ngo ukuthuthukiswa yasebhange umkhakha umkhuba ezincane (okubhekwe) amaphrojekthi kanye mega-amaphrojekthi (njalo okufinyelela enhlosweni yamazwe ngamazwe, kazwelonke, esifunda, imikhakha ekufezeni isethi ehlelekile amaphrojekthi amancane). Iningi yinkimbinkimbi ezahlukene inkinga kwamabhange uyakwazi ukuxazulula cybernetics kwezomnotho. Izibuyekezo akudingeki ufune amaphrojekthi yimpumelelo. Zagijima ngokushesha ukubamba iso impumelelo ebhange, ngokuvumelana ukuthi amakhasimende ziyobheda ...
Ngokucaca, sikunikeza isibonelo project encane. Bank Inamandla edonsela ikhadi amaphrojekthi iholo amabhizinisi amaningi nezinhlangano. Umgomo wokuqala kufinyelelwa - ukwanda nezikweletu-akhawunti kwabasebenzi ikhadi.
Isinyathelo sesibili ukuze hlanganisa sokungena inkokhelo. Lokhu inkinga isixazululekile ngesimo iphrojekthi. Iletha ndawonye ochwepheshe ubuchwepheshe IT-ngamakhasimende, nokusebenza nebhalansi-akhawunti yekhadi. Batfutfukisa izindlela yokudala kiberresheniya Izinjongo yephrojekthi, usebenzisa i-EFT ubuchwepheshe kanye nokuvikelwa Imininingwane indlela amatafula zingubudlelwane isipiliyoni yokudala elikhulu izinhlelo interface for abadlali. Idale ubuchwepheshe oyi-wahlolwa mklamo, okuyinto bakhangwa eyodwa noma ezimbalwa yabaqondisi ebhange.
Logistics ngokombono amathuba emisebenzi
Nokho, ezohwebo kanye Logistics zifune amaphrojekthi wadala bese zilandelwa ngu cybernetics. Okwamanje, uhlobo ushintsho umnotho eRussia, Ukraine inquma ukukhula ukufunwa ukuthuthukiswa software. Futhi phakathi ethembisayo - umsebenzi ku iphrofayili EC. Ngesikhathi esifanayo isidingo amakhono ukumodeliswa zezibalo izinqubo zezomnotho phezu ingxenye abaqashi. Lezi ziphetho ukuza CareerCast yamazwe omhlaba ngo-2014.
Masikhumbule beluthumela ukuphathwa itekisi uhlelo, ngesikhathi esifanayo esehlanganise emadolobheni amaningana. Kutfutfukisa ligcine inkampani IT, okuyinto by ncazelo funa abezindaba okukhethekile "Economic Cybernetics". Subsystem amarekhodi tekusebenta abashayeli emzileni, umzila, Ukwahlukaniswa izingcingo ikhasimende, ukusebenza parallel uhlelo lokuxhumana okusekelwe kwemali, ukubika ...
Ukuthola ama-oda isilawuli ezenzakalelayo. Inani isevisi ibalwa liphakathi, ikhumbula ubude umzila kanye yokugibela. Umphathi parallel umsebenzi wakhe ubona umsebenzi nozakwabo. Umsebenzisi-friendly interface ikuvumela ukuba ngokushesha dispatcher. Ama-oda zihlukaniswe ngezigaba ezintathu:
Software kusuka oda "kwangaphambilini" ngemva kwemizuzu engu-30 ukudlula esigabeni "hot".
IDispatch itekisi isevisi - kumane nje kuyisibonelo esisodwa. Namuhla ukusebenza ngo nokuphathelene software kanye hardware imikhiqizo cybernetics sibopha ukuthi indlela eyodwa ukulawuleka ngoba izinhlangano zikahulumeni, ukhiye imikhakha yebhizinisi, ngokwendawo esilinganayo chain ezitolo, Pharmacy, amagalaji nokunye. D.
Isidingo amabhizinisi inethiwekhi ukuhweba Ochwepheshe EC
Iziqu khono "Economic Cybernetics" ezisebenza kufunwe e "indlunkulu" kwenethiwekhi izinkampani zokuhweba. Kungani? Uzenzela: kulinganiselwa ukuthi kahle inethiwekhi ukuhweba inkampani bakwazi wasithatha mayelana 90% wemakethe. Kusobala ukuthi lokhu kudinga utshalomali. Kodwa ubuchopho futhi ukuthi sidinga! Ake sithi izinkinga zangempela yohwebo inethiwekhi, izixhumanisi zalo eziyinhloko:
· Consolidated, logistically nezaba ukuthengwa kwezimpahla at the best amanani;
· Khulisa inzuzo umthetho eziqinile bokusebenza olulodwa maphakathi ishede inethiwekhi yenkampani;
· Ukuqapha okuqhubekayo we nekunciphisa ukusetshenziswa kwezakhiwo kanye yokusungula nokwenza ngokusebenzisa ukusebeza kahle yezokuthutha;
· Ukuthuthukisa of amalungiselelo ukulawula.
Ngakho, lapho sicabangela isimiso sezomnotho inkampani yenethiwekhi, singakwazi ngempela ukubona isidingo abasebenzi abanamakhono ukuze okukhethekile wafunda.
Yini ekhubaza ekuqhubekeleni phambili kwezindaba zezomnotho zezibalo namuhla inquma indawo yabo ogxile elisizayo, amayunithi ezikhethekile kakhulu komnotho (emva mission eledlule icekelwa phansi Amathrendi nomphakathi imisebenzi efana cybernetics kwezomnotho)?
Amathemba kuseza. Isizathu - yokucabanga: ezimweni yokujama tsi kanye nenhlekelele, lapho ukulawula wenziwa ikakhulukazi "manual" Imodi, amabombo kaningi isitayela umlawuli ukuphathwa kuka ubuchwepheshe. Asetsembeke. Priority ubuholi paternalistic kuholela yokuthi, cybernetics ochwepheshe ngokuvamile bazithola sesimweni unenviable - "Ngibona konke, ukuthi kwenziwa kanjani, futhi kungakhathaliseki ukuthi angikwazi ukuthonya." Amehlo abo izinkinga uhlale yesibili. Primary - ukuphathwa ziqondiso.
Inkinga enkulu iba ukungabi khona kohlelo isimo ngempumelelo ukuheha Izishoshovu abasha kule mboni. Ngenxa yalokho, abaqashi gourmets ukubeka babulawa ngoba abafundi iziqu ibha: isipiliyoni lochwepheshe. Kodwa isikhathi alikho! Enginakho lolwazi umphathi ukuqasha akakwazi ngokwanele ukuhlola kwabo. Futhi eyaba ukuthola umsebenzi iziqu-cybernetics ngakho akekho uzokubuza imibuzo, okuyizinto okukhethekile yakhe - ku isici analysis and management oluhambelana. Ngakho, umsebenzi wakhe ngeke athobele okukhethekile. Lwati zeminye imikhiqizo software ukhohliwe, nezinhlelo ezithile yisikhathi, futhi umphumela imfundo incipha ... Kube ngempela okufanele ukucabange ...
Kufanele sivume ukuthi cybernetics kwezomnotho senza ukuthi - kungcono Ngokuzayo mkhakha. (Kayisikho na ukubona isizathu le "kanzima"?) Kuyanda wakhe, futhi ngenxa yalokhu nesidingo esiphezulu amakhosi-cybernetics - phambili, njengoba abatshalizimali sukela emazweni post-Soviet, lapho umsebenzi iba evamile lapho uvulekile kwabasha ubani onesibindi abantu umnyango yasekhaya "Silicon izigodi "lapho udumo ekukhetfweni ngeke nokuzwelana othayi, partisanship, kanye nekhono ngobuhlakani nangempumelelo ukuphatha izakhiwo kwezomnotho yinkimbinkimbi nelula.
Isizathu - e Macroeconomics. Sidinga utshalomali okwanele okusezingeni eliphezulu embonini, ukucacisa ezingaba ukukhiqiza. Sidinga isilawuli esobala phezu bachitha izimali lifanele izindleko abasebenzi yingxenye yale project. Abaphathi kudingeka mncintiswano ngomqondo kwesokudla izwi.
Ukusebenza kotshalomali, ngeshwa - lohlupho Amazwe iminotho iyaguquka. Bakha izikimu ezingenakubalwa zezimali Ezicebisa oligarchs nokwakha notshwala shady zezimali. Ngeshwa, ubulungisa buyini kodwa ukuba babe nezwi layo ...
Uba kanjani umklami ingaphakathi: ukuqala kuphi futhi yini okufanele uyenze?
Crimean Federal University. Izibuyekezo
Yini okufanele ngibe yinhloko isibuyekezo umkhuba
Omsk State Technical University: amandla kanye nokubuyekeza
De empeleni waba futhi de jure. izincazelo
Ake sibone ukuthi yini ulinganiswa Joules
Kanjani ukuze zenze ukuba kunyuke inhloli zokudakwa futhi wenze isifiso!
Funda indlela ukupheka inkukhu ngendlela ezehlukene
Izici biotic imvelo, ukuthi iyini
Dress-ihembe: yini okufanele uyigqoke? fashion yabesifazane
Parachute intambo - kuyini? Isicelo futhi aluka isikimu cord parachute
Tarquin le Proud: imisuka nezithombe
Iveni ekhululekile Mazda BT 50